Inkcazo:I-Dvd yemoto ye-Ibiza2018,Ukuzonwabisa ngeemoto ze-Ibiza2018,Ibiza2018 Imoto ye-Dvd
Home > Imveliso > Isihlalo se-Dvd seMoto ye-Android > I-dvd yemoto ye-Android ye-Ibiza 2018
Imveliso: 20000 per month
Indawo yokuQala: China, Shenzhen
Isidlali se-multimedia ye-Android 8.0 PX5 yeSeat Ibiza 2018
I-1.TPMS: Inxibelelaniswe ngokugqibeleleyo nale yunithi yentloko ngokufakelwa ngokulula, i-TPMS ibika i- player ye-multimedia yexesha elizayo ye-8.0 PX5 yeSeat Ibiza 2018 ngenkqubo yoxinzelelo ngesondo nge-pictograph okanye isibhengezo sesilumkiso esisezantsi sokukunceda ugcine Ukusetyenziswa kweoyile, ukwandisa ubomi beeta, ukunciphisa ixesha lokuphumla kunye nokugcinwa kunye nokunyusa ukusebenza kwendalo. Ukuqwalaselwa kwangoko kokungasebenzi kakuhle kwamatayara anikezwe yi-TPMS kunokuthintela iingozi zendlela ukuphucula ukhuseleko kuyo yonke inkqubo yokuqhuba.
Ikhamera ye-2.Backup: Yongeza ikhamera egciniweyo yokutshintsha ngokuzenzekelayo kwindawo yokupaka i- Android 8.0 PX5 player ye-multimedia yeSeat Ibiza 2018 ngelixa iphinda ibuye umva . Olu khetho lubandakanya ikhamera yokungavuthwa kwamanzi kunye nokubonwa kobusuku obuya kuphakanyiswa kwindawo yezibane zelayisensi yeemoto kunye neentambo zokudityaniswa kwayo. Ikhamera yokujonga umva ingamiselwanga. Ukuba ufuna i-wireless, nceda uthumele inqaku emva kokubeka iodolo.
I-3.Bluetooth: Ihlaziya imoto yakho nge-BM8 imodyuli ye-Bluetooth yemidlalo ye- Android engenasiphelo ye-8.0 PX5 ye-multimedia yeSeat Ibiza 2018 kunye nokusasazwa komculo. Ngelizwi eliphuma kwizithethi zemoto, unokucofa, uphendule, wenqabe kwaye ungayithethi iminxeba ngaphandle kokususa izandla zakho kwisondo lokuqhuba. Umsebenzi wayo wencwadi yefowuni wenza ukuba ukwazi ukukhangela abafowunelwa ngqo kwisikrini esikhulu secandelo lentloko. Ukubanakho kokuhambisa izixhobo zakho ozithandayo kwifowuni engenazingcingo zeSmart nayo iyanqweneleka. Umbhobho wangaphakathi ubandakanyiwe ekuthetheni ngokukhululekileyo.
I-4.DAB: Ngokufutshane kusasazo lwedijithali losasazo lwe-digital, i-DAB njengomphathi we-digital radio technology we- Android 8.0 PX5 player ye-multimedia yeSeat Ibiza 2018 yezikhululo zosasazo zosasazo zidibanisa inani leempawu ukunciphisa ingxaki zokuphazanyiswa kunye nengxolo yesandi. Isandi esikumgangatho ophezulu, sinika iinkqubo zerediyo ngaphezulu kwesibonisi esithile kunomathotholo we-radio ye-FM. Ngaphandle koko, i-DAB ayinakuzenzekela ngokuzenzekelayo kuzo zonke izikhululo ezikhoyo, inikezela uluhlu lwakho onokuthi ukhethe kulo, kodwa ikwabonelele ngolwazi lwexesha lokwenyani elinje ngezihloko zeculo, uhlobo lomculo kunye neendaba okanye uhlaziyo lwendlela. Yeyona nto ilungileyo kubathandi berediyo kunye nabathandi bomculo.
Umsebenzi omtsha: DSP
Isisombululo se-Android sinokufunda izixhobo ze-DSP ngokuzenzekelayo, ii-UIs ze-amplifier-useto lwe-Hardware okanye ngaphandle kwe-DSP kwahlukile.
Yenza indawo ekhankanyiweyo emotweni ukuba iphulaphule kakuhle. Kubonakala ngathi kukuhlala embindini wenqanaba.
Xa ivuliwe, i-DSP iza kusebenzisa iiparameter zesithethi ezisetelwe ngokuzenzekelayo ukubala ezona sethingi ziphulaphuleyo.
Cinezela iqhosha elingezantsi njengomqhubi, ikopi, iReLLt, iRealRight, ukubeka esona sihlalo simameleyo.
I-screen ezimbini ezisebenzayo kwi-Intanethi
Inkxaso yeqhosha leMircy function, ungangqamanisa nawuphi na umxholo kwifoto yakho ebonakalayo ukubonisa kwimoto enkulu ye-DVD kwimidlalo, kwimifanekiso, kumculo, kwi-ect.
Yahlula i-1024 * i-600 yokuchukumisa isikrini ezimbini eziqhuba ii-2s zokusebenza ngaxeshanye ecaleni
Ukulawulwa kwevili lokujikeleza
Le nkqubo iqulethe ukubeka esweni kunye nee sensor ezine, xa usebenzisa izinzwa zangaphakathi, inzwa endaweni yofakelo lwegesi yemoto yangaphambili efakiweyo, sebenzisa inzwa yangaphandle, sensor sebenzisa anti-theft nati ngokuthe ngqo kwi-injini yemoto yangaphambili; inzwa yokulinganisa uxinzelelo lwethayile kunye neqondo lokushisa, kwaye uthumele ulwazi lwethayile kumamkeli we-TPMS, umamkeli uthumela umhla kwi-DVD ngezibuko le-USB. xa uxinzelelo lwetrayi luphantsi, okanye ukuvuza, kunye nobushushu obuphezulu, iDVD ibe nemfazwe ngesandi kunye nokukhanya, ukwenzela ukukhumbuza abaqhubi ukuba banake ingqalelo kukhuseleko lwezithuthi.
PARROT BlUETOOTH (ngokuzithandela)
Ukufikelela kwi-Intanethi (nge-DUN okanye nge-PAN)
Ukwamkelwa kwelizwi / Umbhalo ku
I-FC6000T idibanisa inguqulelo yamvanje yeParrot yeBluck stack (Blues).
I-Blues inika umthengi inqanaba eliphezulu kakhulu lokuhambelana kunye neefowuni ezininzi ezikhoyo kwimarike kunye nokubonelela ngencwadi yeefowuni kunye listsynchronization. I-FC6000T inika ithuba lokusebenzisa isiSithethi esiZimeleyo seLizwi (i-SIVR) kunye nesicatshulwa esiya kwiNtetho ye-algorithm (TTS).
I-DAB + (ngokuzithandela)
Usasazo lweDijithali Audio lukuvumela umculo ohlukileyo wengingqi kunye nowakho owaziwayo kunye namajelo amatsha. Umgangatho wesandi seCD kunye nengxolo engenasiseko kuthumelo olufanelekileyo yenza iRadiyo ye-DAB ngamava akhethekileyo kwimoto. Ukunyuka okungapheliyo kweziteshi kunye nokwandiswa kwendawo yesikhululo kungekudala kwenza i-DAB ifikeleleke kuninzi lweYurophu.
I-Q1: Ngaba Iya Kuhambelana Nemoto Yam?
A1: Nceda usithumelele unyaka / igama kunye nefoto yeDashboard oyilindeleyo.
Q2: Lixesha elingakanani Iwaranti?
A2: unyaka omnye.
I-Q3: Kutheni i-Remote Ayikwazanga ukusebenza?
A3: Nceda ujonge ibhetri Ngaba akukho mandla
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nam
I-whatsapp: +86 13226816572
I-Dvd yemoto ye-Ibiza2018 Ukuzonwabisa ngeemoto ze-Ibiza2018 Ibiza2018 Imoto ye-Dvd I-Dvd yemoto yeFabia 2017 I-Dvd yemoto ye-W203 I-Dvd yemoto ye-LC200 I-Dvd yemoto ye-Camry ye-2018 I-Dvd yemoto ye-CX-5 2017